सुनील शर्माबाट अरुले पनि सिक्लान ? - Jhilko
चैत्र १३ गते विहीवार नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्माले डा. भगवान कोइरालालाई एक पत्र लेखे र प्रस्ताव गरे कि नोबेल मेडिकल कलेज अस्पताललाई कोरोना विशेष उपचार केन्द्र अर्थात कोरोना उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा प्रयोग गरौं । त्यसका लागि आफ्नो स्वामित्वको अस्पताल, पूर्वाधार र जनशक्ति सरकारलाई दिन तयार रहेको उनले घोषणा गरे ।
सरकारका तर्फबाट कोरोना रोकथाम संयोजन समितिका संयोजक डा . भगवान कोइरालाका लागि डा. शर्माले राखेको प्रस्ताव आफैमा एक सुखद थियो । किनभने पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा ७१ भेन्टिलेटर, सात सय ६४ शैय्या र पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेन्ट रहेको अस्पताललाई कोरोना विशेष उपचार केन्द्र बनाउन पाउनु सरकारका लागि अहिलेको अवस्थामा निकै सुखद खबर हो, भोकालाई खिर भने जस्तै ।
हाल सात सय ६४ शैय्या रहेको अस्पताललाई एक हजार क्षमतासम्म बिस्तार गर्न सकिने, जनशक्ति र उपचार सामाग्री तथा सुरक्षा लगायतका प्रवन्ध सरकारी समितिसँगको आपसी छलफल र सहमतिमा परिचालन र सक्रिय पार्न, गर्न सकिने डा. शर्माको प्रस्तावले डा. कोइराला नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न खुसी र उत्साह थपिरहदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउने जनता नै हुनेछन ।
भनिन्छ, कुनै पनि असल मानिसको वास्तविक परीक्षा संकटकै बेला गरिन्छ । जो कसैले पनि आफ्ना नजिकका वा टाढाका भनी खुट्याउने बेला पनि संकटकै बेला हो । विश्वलाई एकसाथ गाँजिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको मुखमा नेपाल पनि परिसकेको र सरकारका लागि कोरोनाको सम्भावित संक्रमण भारी परिरहेका बेला विराटनगरको एउटा सिंगो मेडिकल कलेज, त्यसको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति र उपचार सामग्री सरकारी समितिको लागि कोरोना उपचार विशेष केन्द्र बन्न पाउनु चौतर्फी सबैका लागि सुखद पक्ष नै हो ।
अझ राजधानी काठमाडौंका ग्राण्डी, अल्का जस्ता नाम चलेका र अरु केही निजी अस्पतालले कोरोना संकटका बेला बिरामीहरु उपचार गर्न अस्वीकार गरिरहेको बेला विराटनगर जस्तो औद्योगिक शहर र घनाबस्तीको शहरमा रहेको चर्चित र सुविधा सम्पन्न नोबेल मेडिकल कलेज नै पूरै कोरोना विशेष अस्पतालमा रुपान्तरित हुन दिनु डा. सुनिल शर्मा जस्ता मनकारी दानवीरहरु पनि यो समाजमा अझै बाँकी छन् भन्ने फरक र सुखद सन्देश पनि हो ।
कोरोनाको सम्भावित संक्रमणमा को यसको शिकार बन्छ वा को यसबाट सहजै बाँच्न सक्छ ? योे केवल काल्पनिक प्रश्न मात्रै हो । किनभने २१ औं शताव्दीको सबैभन्दा शक्तिशाली र सर्वव्यापी भाइरसका रुपमा कोरोना संसारकै मानव जुनी र मानव विकासका आधुनिक उपलव्धिहरुका लागि सामुन्नेको खतरनाक चुनौति बनिरहेको छ । धनी, गरीव, सम्पन्न विपन्न वा साना ठूला सबै कोरोनाका लागि एकै वर्गका शत्रु साबित भइरहेको यथार्थ छ ।
विश्वभरकै मानव समुदायले आफूले सकेको योगदान दिएर यो महामारीको संकटलाई सामना गर्नु नै असल मानवीयता र समाजसेवाको नमूना हो । किनभने हिजो कोरोना नआउँदा पनि मानिसलाई यसप्रकारले डा. सुनील शर्माहरुको वास्ता थिएन र उनीहरुको मेडिकल कलेजको सरकार वा जनलाई पनि खास जरुरत थिएन । भोलि कोरोनाको सम्भावित संकट टरेपछि पनि यो खालको सपोर्ट र सहकार्यको खासै अपेक्षा सरकार र जनतालाई नहुन सक्छ ।
अहिले कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी खाडो जागेको र सरकार किंकर्तव्यविमुढ बनिरहेका बखत खास प्रतिकूल परिस्थितिमा डा. सुनील शर्मा आफै एक उदाहरणीय समाजसेवी, जनतासेवक र राज्यप्रति पूर्ण उत्तरदायी स्वास्थ्यसेवा प्रदायक व्यक्तित्वका रुपमा उदाहरणीय पात्र बनेका छन् । यस अर्थमा डा. सुनील शर्मा एकजना पूर्वाञ्चलको विराटनगरबाट उदाएका उम्दा कोरोना विरुद्धको नेपाली युद्धका अनुकरणीय शिखर योद्धा र दाता हुन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । किनभने उनले यतिबेला देशको संकटलाई टार्न आफ्नो निजी सम्पति र पौरख जनताका नाममा सरकारलाई सुम्पेका छन् । यस्तो कर्म सानो मुटु र मस्तिष्क भएकाहरुले सितीमिती गर्न सक्दैनन् ।
डा. महावीर पुनको आविस्कार केन्द्रले स्वास्थयकर्मीका लागि आवश्यक पीपीई तयार गर्न डा. भगवान कोइरालाको संयोजन समितिबाट स्वीकृति लिई स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि विशेष पोशाक तयार गर्नमा एउटा अलग्गै प्रकारको नमूना लायक योगदान गर्यो । सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनबाट ल्याउँदै गरेको मेडिकल सपोर्ट र सहायताको आफ्नै पाटो छ । पूर्वाञ्चलको मेडिकल कलेज कोरोनाको विशेष उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल नै हुने भयो ।
अप्रत्यासित रुपमा आइलाग्ने जनताका आपतविपतमा डा. सुनील शर्मा जस्ता मनकारी मानिसहरुको हात र साथ मिल्नु नेपाली जातिको मनकारी र समन्वयकारी संस्कार र परम्पराको निरन्तरता मात्रै होइन, सरकारका लागि संकटसँग जुध्न नागरिक तप्काको होस्टेमा हैसे पनि हो । यस्तै डा. सुनील शर्माहरु सातै प्रदेशका मेडिकल कलेजहरुबाट वा आआफ्नो कर्मथलोबाट उदाउन सकून भन्ने कामना गरौं ! यसैका आधारमा डा. सुनील शर्माहरुलाई जनजनले घरघरबाट धन्यवाद भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुने छैन ।
नोबेल मेडिकल कलेजलाई कोरोना विशेष उपचारको डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन डा. सुनील शर्मा तयार हुनु वास्तवमा नै संकट टार्न नागरिक स्तरको खास योगदान नै हो ।
पढ्नुहोस, डा. सुनील शर्माले डा. भगवान कोइरालालाई लेखेको पत्र,
ट्रम्पले 'चीनियाँ भाइरस' भन्दै खिल्ली उडाउँदा कोरोनाले थला पार्यो अमेरिका, सी–ट्रम्पबीच...
३०७ जर्मन यात्रु बोकेर काठमाडौंबाट फर्कियो कतार एयर
हिजोआज विकासका नाममा चिल्ला सडक बनाउने, वन बिनास गर्ने, कंक्रिटका भवन बनाउने, चाहिने...